Ogaden News Agency (ONA) – Kalfadhigii 12aad Ee G/dhexe Ee TPLF oo Fashil Kudhamaaday.
Kalfadhigii 12aad Ee G/dhexe Ee TPLF oo Fashil Kudhamaaday.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya in uu gabi ahaanba burburay shirkii Golaha dhexe ee urur kusheega TPLF, kaas oo sida aan horaan idiinku sheegnayba socday dhowrkii bari ee lasoo dhaafay.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa gabi ahaanba natiijo la’aan kusoo dhamaaday kalfadhigii 12aad ee Golaha dhexe ee kooxda TPLF, waxaana magaalada Addis Ababa kusoo laabtay kooxda oo dhowr qaybood ukala jaban isla markaana ay kooxba kooxda kale eedayn dusha usaarayso.
Kalfadhigan oo looqorsheeyay in uu socdo mudo 4 bari ah ayaa qaatay 7 bari oo xidhiidh waxaana sida lasheegayo lasoo xidhay kalfadhiga isagoon ladhamaynin qodobadii loobalamay in laga hadlo, kalfadhiga ayaa sida lasheegayo ladoonayay in lagaga hadlo 4 qodob oo muhiim ah waxaana laga gudbi waayay 3 qodob oo kaliya kuwaas oo markay dhamaan waayeen shirka lasoo xidhay.
Kalfadhigan oo Albaabada looxidhay ayaa ugu dambayntii laga soosaaray bayaan aan wax nuxudh ah lahayn kaas oo dadkii kulanka kadhursugayay ay aad ulayaabeen, bayaanka ayaan gabi ahaanba lagu soo hadal qaadin xaaladaha amaanka, abaaraha iyo cudurada dadka saameeyay waxayna dadku aad udhaliileen cantarabaqashkii waraaqda lagu soo qoray.
Laanta af Axmaariga ee ideecada BBC-da ayaa sheegtay in ra’yi uruurin ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dhalinta Gobolka Tigree 90% ay qabaan in shirku uu fashilmay isla markaana wax lataaban karo uusan kasoo bixin, sidoo kale arigtada dadka kale ee wadanka Gumaysiga Itoobiya kusugan ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba aysan wax muhiim ah shirkaas u arag.
Macalin wax kadhiga jaamacada Addis Ababa oo lagu magacaabo Mahari ayaa warbaahinta usheegay in shirkaas hadii laqabto iyo hadaan laqabanin uu isku midyahay bulshaduna aysan kasugaynin wax natiijo ah.
Dhinaca kale magaalada Addis Ababa ayaa siwayn looga dareemayaa burburka shirka Maqale waxaana durba soo baxaya khilaafka udhaxeeya kooxda oo siwayn looga baraha ay bulshadu kukulanto loogaga sheegaysanayo.